Yemahara nhasi paApple TV +: 12 Varume Vane Hasha: Chokwadi Nhau dzeKuva Munhu Mutema muAmerica Nhasi | Ndinobva mac
Apple, muhondo yayo yekurwisa kusarongeka uye nekurwisa zvese zvinomirira kuzvidza vashoma, yakagadzira zvirongwa zvakasiyana senge iyo Equity uye Rudzi Ruramisiro chirongwa kurwisana nehurongwa hwakasarudzika nekusimudzira kuenzana kwemarudzi muAmerica Yakawedzerwa kune iyi ndiyo vhezheni nyowani yakanyorwa kubva mukamuri huru yeApple Park ye12 Varume Vane Hasha: Chokwadi Nhau dzeKuva Munhu Mutema muAmerica Nhasi. Ichave iripo mahara paApple TV + kwemavhiki makumi matanhatu nemasere.
Iyo Billie Holiday Theatre Kambani ichangobva kunyora vhezheni nyowani yeVane gumi nevarume vane Hasha: Chokwadi Nhau dzeKuva Munhu Mutema muAmerica Nhasi paApple Theatre. Iyi bhaisikopo nyowani ichave iripo mahara kubva nhasi, Kurume 26 kusvika anotevera Kubvumbi 22. Iyo vhezheni yakanyorwa muSteve Jobs Theatre yakafanana neyekutanga (kuongorora nhoroondo dzekusarurana kwerudzi nekuita kwemapurisa). Izvo zvakadaro zvinosanganisira itsva nyowani nyaya inovhara kupondwa kwaBreonna Taylor.
Kwemavhiki mana iyo firimu ichave ichiwanikwa kune vese avo vane Apple TV application. Izvo hazvidiwe kuve nekushandira kunyorera kuApple TV +. Wendell Pierce, mutambi uye nhengo yebhodhi revatungamiriri, akataura mune zvirevo.
Chigadzirwa chakagadzirwa neBillie Holiday Company muSteve Jobs Lounge muApple Park chinomiririra mweya wenhaka yekuenzana kwemarudzi. Panguva imwecheteyo inovandudza kuti nyaya iyi inotaurwa sei. Iri ibasa rinodikanwa uye rinowirirana nenguva rehunyanzvi rinotarisa pane kusarongeka kwemadzinza munyika ino. Uye kudyidzana kwedu neApple kunoita kuti zviwanikwe zvakanyanya kuruzhinji, zvichikurudzira nhaurirano dzine musoro dzinotungamira mukuchinja.
Munguva dzechirwere uye sezvo kirasi isingakwanise kushandisa mharidzo, chaiyo yakasarudzika uye yakanaka imwe nzira yekushandisa iri kupihwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Yemahara nhasi paApple TV +: 12 Varume Vane Hasha: Chokwadi Nhau dzeKuva Munhu Mutema muAmerica Nhasi
Apple Music inogona kubatsira vana vane matambudziko ekutaura uye ekurira